Gacan-gashiyaasha Shirkadaha iyo Warshadda - Soosaarayaasha Galoofiska Shiinaha
Mudanayaal Sheep classical xiirto faro la'aan Mittens
Waxay ka sameysan yihiin labbis jilicsan oo jilicsan oo jilicsan, waxaa lagu tolaa iyadoo la adeegsanayo farsamooyin dhaqameed. aad iyo aad u diiran oo waaraya hadana hadana fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan gacmo gashi neefsashada. Ku habboon inaad ku raaxeysato taleefankaaga casriga ah xilliga qabow iyo sidoo kale caan ku ah wadista, iyo sidoo kale dharka loogu talagalay dharka moodada xilliga qaboobaha.
Gacmo gashi gacmo gashi ah oo loo yaqaan 'Merino'
Qaabka moodada, waa mid heer sare ah oo raaxo leh, oo laga sameeyay 100% merino maqaar ah, mid ka mid ah dhogorta adhiga ee ugu tayada wanaagsan. Koofiyadda ku habboon ayaa isu rogi karta si ay u noqoto dhar moodada khafiifka ah, sidoo kale hoos ayay u dhici kartaa. Adigay kugu xidhan tahay adiga. Gacanta waxaa ka xardhay farsamayaqaanno khibrad u leh in ka badan 10 sano., Kaas oo sameeya galoof kasta inuu yahay mid raaxo leh oo raaxo leh. Waa chioce ugu wanaagsan ee xilliga diirimaad-qaboobaha.
Mudanayaal gacmeedyo dhab ah oo wan yar oo dhogor dhogor ah
Waxaa laga sameeyay 100% lambskin dhab ah oo ah merino, wichih waa mid aad u diiran oo waaraya walina fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan galoofyadan inay neefsadaan. oo dhogorta ayaa jilicsan oo adkeysi leh. u dhaqmo sida kuleylka dabiiciga ah ee jirkaaga. Waxaa loogu talagalay midabyo madow iyo cawl, dhogor cirro ah oo gadaal ka jajaban timir madow, Ishaada ku qabooji isla markiiba. Cufka waa la rogrogi karaa ama hoos u dhici karaa. Naqshadaha labadaba waa kuwo la taaban karo oo casri ah.
Mudanayaal gacmo gashi gacmo gashi guud ahaan lagu sameeyey oo qaansada lagu garto qaanso
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee 'merino', Kuwa ugu dambeeya ee gacmo gashi gacmo gashi Si qurux badan loo qaabeeyey loona farsameeyay. . duub duuban. farsamada gacanta oo dhan oo dabacsan jilicsan, adag oo adkeysi leh.Waxay ku habboon tahay labiska cimilada qabow.
Mudanayaal gacmo gashi gacmo gashi guud ahaan lagu sameeyay oo leh aalad cufan
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee 'merino', Kuwa ugu dambeeya ee gacmo gashiga raaxada leh Si qurux badan oo qaabeysan loo farsameeyay. ku habboon, adag oo adkeysi leh.Waa ku habboon tahay labiska cimilada qabow.
Mudanayaal gacmo gashi gacmo gashi oo dhan lagu sameeyey oo lagu garto godad jilicsan oo jilicsan
Si qurxoon loo qaabeeyey loona farsameeyay. , dabacsan, adag oo adkeysi leh.Waa ku habboon yahay labiska cimilada qabow.
Gacan-gashiyada dhabta ah ee gacmo-gashiga Lambskin oo ay ku jiraan faraha shaashadda taabashada
Si xarrago leh ayaa loo qaabeeyey oo loo farsameeyay. Lagu sameeyay meeris adhi jir ah. Hal saf oo dhogor cad ah oo laga soo saaray tirm la mid ah kan cad ee laalaabmay. Fiiri muqaddas saafi ah. Kaliya maaha inaad gacanta ku hayso, sidoo kale u oggolow inaad ku raaxeysatid ku wareejiso taleefankaaga casriga ah xilliga qaboobaha.
Gacan-gashi gacmeed gacmeed Merino gacmo-gashi oo dhogor dhogor ah leh
Laga sameeyay 100% lambskin dhab ah ee merino, kuwani waa kuwo aad u jilicsan. Maaddadan dabiiciga ah sidoo kale way diirran tahay oo waa la neefsan karaa. Oo lagu qaabeeyey saddex meelood oo xarig ah Si taxaddar leh ayaa loo doortay dhogorta dawacada ugufiican sida dharka. Qurux iyo raaxo! Gacanta waxaa ka xardhay farsamayaqaanno khibrad u leh in ka badan 10 sano. Gacmahaagu ha kululaadaan jiilaalkan iyo qalabka ka sarreeya.
Mudanayaashu waxay gacmo gashi gacmeedyo Merino ah u xireen gacmo gashi
Ka sameysan dhogor dhoof ah oo aad u fool xun oo meeris ah, kuwani waa kuwo aad u jilicsan. Maqaarka idaha waa mid aad u diiran oo adkeysi leh hadana fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigaan mittenskan kuwo la neefsan karo. Waxay gacmahaaga ka dhigi doonaan kuwa diirran maalmaha ugu qabow Dhammaan farsamada gacanta. ku habboon isticmaalka maalinlaha iyo qabowga.
Gacan-gashi gacmo-gashi maqaar gacmeed Napa ah oo leh hal dhibic oo muuqaal gacan-qabsi ah
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee merino napa, Idaha dhogorta xiira & maqaarka Napa. maqaar napa ah oo waara oo dhogor dhogor dabiici ah oo diiran oo dabiici ah. Noocyada caadiga ah ee gacmo-gashiyada raaxada leh ee loo yaqaan 'classical in muddies' raaxada leh Oo si qurux badan loo qaabeeyey loona farsameeyay. Naqshad ku samee hal dhibic oo gacan-qabsi dhabarka ah, qurux iyo muuqaal leh oo la jaan qaada dhogor isku laaban oo ka soo bax.
Mudanayaal gacmo-gacmeed laba-weji leh oo galoofyo harag adhi ah leh xirmo dhammaad furan leh
Ka samaysan kaliya maqaarka adhiga ee 'merino', xiirashada mid ka mid ah adduunyada dhogorta adhiga ugu fiican ee tayada fiican leh. Maqaarka adhiga ee dabiiciga ahi waa jilicsan yahay oo fudud yahay, si la yaab leh diiran oo aan caadi ahayn u adkaysi kara Classical in mudanayaal gacmo gashi gacmo furan Oo si xarrago leh loogu talagalay loona farsameeyay. Lagu gartaa cufan dhamaadka furan, oo ku habboon hal xiritaanka xarig dhuumasho. Eeg dabiici iyo qurux, Dhammaanba waxay ku dhacaan meesha.Waa ku habboon tahay labbiska cimilada qabow!